नहेम्याह २ | अनलाइन बाइबल | नयाँ संसार अनुवाद
लेखको भाषा Hindi (Roman) Punjabi (Roman) Singapore Sign Language अङ्ग्रेजी अजरबैजानी अजरबैजानी (सिरिलिक) अफ्रिकान्स अमेरिकी साङ्केतिक भाषा अरबी अर्जेन्टिनियन साङ्केतिक भाषा अल्बेनियन अल्बेनियन साङ्केतिक भाषा अस्ट्रियन साङ्केतिक भाषा अस्ट्रेलियन साङ्केतिक भाषा आइरिस साङ्केतिक भाषा आएमारा आम्हारिक आर्मेनियन आर्मेनियन (पश्‍चिमी) इक्वेडरियन साङ्केतिक भाषा इग्बो इजरायली साङ्केतिक भाषा इटालियन इटालियन साङ्केतिक भाषा इन्डोनिसियन इन्डोनिसियन साङ्केतिक भाषा इलोको इसोको ईवी उज्बेक उज्बेक (रोमन) उम्बुन्डु उरूग्वेयन साङ्केतिक भाषा एफिक एस्टोनियन ओटेटेला ओरोमो ओसेसियन कन्नडा कम्बोडियन काजाक किकाओन्डे किकुयु किकोंगो किन्यारवान्डा किरिवाती किरून्डी किर्गिज किलुबा केन्यन साङ्केतिक भाषा कोंगो कोरियन कोरियन साङ्केतिक भाषा कोलम्बियन साङ्केतिक भाषा कोस्टा रिकन साङ्केतिक भाषा कोस्रियन क्युबान साङ्केतिक भाषा क्यूबेक साङ्केतिक भाषा क्रोएसियन क्रोएसियन साङ्केतिक भाषा क्वेचा (अनक्यास) क्वेचा (आयाकुचो) क्वेचा (बोलिभिया) क्वेचा (हुआल्लागा हुआनुको) क्षोसा गा गाउरानी गालिसियन गुजराती गून ग्रीक ग्रीक साङ्केतिक भाषा ग्वाटेमाला साङ्केतिक भाषा घानायन साँकेतिक भाषा चिचेवा चिटुम्बुका चिटोंगा चिटोंगा (मलावी) चिनियाँ क्यान्टोनिज (परम्परागत) चिनियाँ क्यान्टोनिज (सरल) चिनियाँ म्यान्डरिन (परम्परागत) चिनियाँ म्यान्डरिन (सरल) चिनियाँ साङ्केतिक भाषा चिली साङ्केतिक भाषा चेक चेक साङ्केतिक भाषा जमैकन साङ्केतिक भाषा जर्जियन जर्मन जर्मन साङ्केतिक भाषा जापानी जापानी साङ्केतिक भाषा जाभानिज जाभान्टे जाम्बियन साङ्केतिक भाषा जिम्बावे साङ्केतिक भाषा जुलू टगालोग टर्कमेन टर्किश टाटार टिकुना टिग्रिन्या टुभालुअन टेटन डिली टोंगन डच डच साङ्केतिक भाषा डेनिश ताइवानी साङ्केतिक भाषा ताजिकी तामिल ताहिटी तेलगु तोक पिसिन त्वी त्सोंगा थाई थाई साङ्केतिक भाषा दक्षिण अफ्रिकी साङ्केतिक भाषा नजेमा नर्वेली नाइजेरियन साङ्केतिक भाषा नाभाहो निआस निकारागुआन साङ्केतिक भाषा नेपाली न्यु जील्याण्ड साङ्केतिक भाषा पंगासिनन् पंजाबी पानामानियन साङ्केतिक भाषा पारसी पाराग्वेयन साङ्केतिक भाषा पेन्सिल्भेनिया जर्मन पेरुभियन साङ्केतिक भाषा पोर्चुगिज (पोर्चुगल) पोर्चुगिज (ब्राजिल) पोर्चुगिज साङ्केतिक भाषा पोलिश पोलिश साङ्केतिक भाषा फिजियन फिनिश फिलिपिनो साङ्केतिक भाषा फ्रान्सेली फ्रान्सेली साङ्केतिक भाषा फ्लेमिस साङ्केतिक भाषा बंगाली बाटाक (कारो) बाटाक (टोबा) बिकोल बिस्लामा बुल्गेरियन बेल्जियन फ्रान्सेली साङ्केतिक भाषा बोलिभियन साङ्केतिक भाषा ब्राजिलियन साङ्केतिक भाषा ब्रिटिश साङ्केतिक भाषा भारतीय साङ्केतिक भाषा भियतनामिज भेनेजुएलन साङ्केतिक भाषा भेन्डा मडागास्कर साङ्केतिक भाषा मराठी मलावी साङ्केतिक भाषा मले मलेसियन साङ्केतिक भाषा मल्यालम माया मालागासी माल्टिज मेक्सिकन साङ्केतिक भाषा मोजाम्बिकन साङ्केतिक भाषा मोटु म्यानमार म्यानमार साङ्केतिक भाषा म्यासडोनियन युक्रेनियन योरूबा रूसी रूसी साङ्केतिक भाषा रोमानियन रोमानियन साङ्केतिक भाषा लाट्भियन लिंगाला लिथुआनियन लुओ लुगान्डा लुन्डा लुभेल वारे-वारे शिलुबा शोना सर्बियन (रोमन) सर्बियन (सिरिलिक) साङ्गो सामोअन साल्भाडोरन साङ्केतिक भाषा सिंहला सिबेम्बा सिलोजी सेत्स्वाना सेपेडी सेबूआनो सेसोथो (लेसोथो) सोट्सेल स्पेनिश स्पेनिश साङ्केतिक भाषा स्रानानटोंगो स्लोभाक स्लोभाक साङ्केतिक भाषा स्लोभेनियन स्लोभेनियन साङ्केतिक भाषा स्वाती स्वाहिली स्वाहिली (कंगो) स्विडिस स्विडिस साङ्केतिक भाषा स्वीस जर्मन साङ्केतिक भाषा हंगेरियन हंगेरियन साङ्केतिक भाषा हाइटियन क्रिओल हिन्दी हिब्रू हिरी मोटु हिलिगेनोन होण्डुरस साङ्केतिक भाषा
नहेम्याहलाई यरुसलेम पठाइन्छ (१-१०)
नहेम्याह सहरको पर्खालको निरीक्षण गर्छन्‌ (११-२०)
२ यो राजा आर्टजारसेजको+ शासनकालको २० औँ वर्षको नीसान* महिनाको कुरा हो।+ राजाको निम्ति मद्य ल्याइयो अनि सदाझैँ मैले राजालाई मद्य टक्य्राएँ।+ तर म राजासामु यति उदास पहिला कहिल्यै भएको थिइनँ। २ त्यसैले राजाले मलाई सोध्नुभयो: “तिमी बिरामीजस्तो त देखिँदैनौ तैपनि तिम्रो अनुहार किन निन्याउरो छ? तिमीलाई पक्कै पनि कुनै कुराले पिरोलिरहेको छ।” यो सुनेर म साह्रै डराएँ। ३ तब मैले राजालाई भनेँ: “राजा दीर्घायु रहून्‌! मेरा पितापुर्खा गाडिएको सहर उजाड भएको छ र त्यसका मूलढोकाहरू आगोले भस्म भएका छन्‌। म कसरी उदास नभई बस्न सक्छु र?”+ ४ राजाले सोध्नुभयो: “तिमी मबाट के चाहन्छौ?” तब मैले तुरुन्तै स्वर्गका परमेश्‍वरलाई प्रार्थना गरेँ।+ ५ अनि मैले राजालाई यसो भनेँ: “यदि महाराजलाई उचित लाग्छ र यस सेवकले हजुरको निगाह पाएको छ भने मलाई यहुदा जाने अनुमति दिनुहोस्‌। म त्यहाँ गएर मेरा पितापुर्खा गाडिएको त्यो सहर पुनर्निर्माण गर्न चाहन्छु।”+ ६ त्यसबेला रानी पनि राजासँगै हुनुहुन्थ्यो। राजाले मलाई सोध्नुभयो: “तिमीलाई यात्रा गर्न कति समय लाग्छ? अनि कहिले फर्कन्छौ?” राजाले मलाई जाने अनुमति दिनुभयो।+ यहुदाबाट फर्कन कति समय लाग्छ, त्यो मैले उहाँलाई बताइदिएँ।+ ७ त्यसपछि मैले राजालाई यसो भनेँ: “यदि महाराजलाई उचित लाग्छ भने महानदी पारिको इलाकाका* राज्यपालहरूको नाममा मेरो हातमा पत्रहरू पठाइदिनुहोस्‌+ ताकि म उनीहरूको इलाका भएर सुरक्षितसाथ यहुदा पुग्न सकूँ। ८ साथै शाही-निकुञ्जको रेखदेख गर्ने आसापको नाममा पनि एउटा पत्र लेखिदिनुहोस्‌ ताकि तिनले मलाई मन्दिर-किल्लाका+ ढोकाहरू, सहरका पर्खालहरू+ र मेरो निम्ति घर बनाउन काठ देऊन्‌।” मेरा परमेश्‍वर मेरो साथमा हुनुभएकोले+ राजाले मलाई पत्रहरू दिनुभयो।+ ९ त्यसपछि म यात्रा गरेर महानदी पारिको इलाकामा पुगेँ र मैले त्यस इलाकाका राज्यपालहरूलाई राजाका पत्रहरू दिएँ। राजाले मेरो साथमा सेनापतिहरू र घोडचढीहरू पनि पठाउनुभएको थियो। १० जब होरोनी सन्बलत+ र अम्मोनी+ अफिसर तोबियाले+ इस्राएलका मानिसहरूलाई मदत गर्न कोही आएको छ भन्‍ने खबर सुने, तब तिनीहरू साह्रै रिसाए। ११ लामो समय यात्रा गरेपछि म यरुसलेम आइपुगेँ। त्यहाँ पुगेको तीन दिनपछि १२ म केही मानिस लिएर राती निस्केँ। हामीसँग एउटा मात्र गधा थियो र म त्यसमा चढेको थिएँ। मेरा परमेश्‍वरले मेरो हृदयमा यरुसलेमको निम्ति जे गर्ने विचार हालिदिनुभएको थियो, त्यसबारे मैले कसैलाई भनिनँ। १३ म रातमा उपत्यका-ढोकाबाट बाहिर निस्केँ+ अनि ‘अजिङ्‌गरको फोहरा’ हुँदै ‘खरानीको थुप्रोको ढोका’-मा पुगेँ।+ मैले यरुसलेमका भत्किएका पर्खालहरू अनि आगोले भस्म पारेका मूलढोकाहरूको निरीक्षण गरेँ।+ १४ अनि म फोहरा-ढोका हुँदै+ राजा-पोखरीसम्म पुगेँ। त्यहाँबाट गधामा चढेर अघि बढ्‌न ठाउँ साँघुरो थियो। १५ तैपनि म बेँसी* हुँदै मास्तिर उक्लेँ+ र रातभर पर्खालको निरीक्षण गरिरहेँ। त्यसपछि म फर्केँ अनि उपत्यका-ढोकाबाट भित्र पसेँ। १६ त्यहाँका उप-शासकहरूलाई+ म कहाँ गएँ र मैले के गरेँ, त्यसबारे केही थाह थिएन। किनभने मैले त्यसबेलासम्म यहुदीहरू, पुजारीहरू, प्रतिष्ठित व्यक्‍तिहरू, उप-शासकहरू र बाँकी कामदारहरूलाई केही भनेको थिइनँ। १७ पछि मैले तिनीहरूलाई यसो भनेँ: “हामी कति दयनीय अवस्थामा छौँ, त्यो त तपाईँहरूले देख्नुभएकै छ। यरुसलेम उजाड भएको छ र यसका मूलढोकाहरू आगोले भस्म भएका छन्‌। आउनुहोस्‌, यरुसलेमका पर्खालहरू पुनर्निर्माण गरौँ। तब मानिसहरूले हामीलाई हाँसोमा उडाउनेछैनन्‌।” १८ त्यसपछि मेरा परमेश्‍वरले कसरी मलाई साथ दिनुभयो+ अनि राजाले मलाई के-के भन्‍नुभयो,+ ती सबै मैले तिनीहरूलाई बताइदिएँ। तब तिनीहरूले यसो भने: “आओ! हामी निर्माणकार्य सुरु गरौँ।” तिनीहरूले यो असल काम गर्न एकअर्कालाई हौसला दिए।+ १९ जब होरोनी सन्बलत, अम्मोनी+ अफिसर तोबिया+ र अरबी गेसेमले+ यस कुराको खबर पाए, तब तिनीहरूले हाम्रो खिसी+ र अपमान गर्न थाले। तिनीहरूले यसो भने: “तिमीहरू यो के गर्दै छौ? के तिमीहरू राजाको विद्रोह गर्दै छौ?”+ २० तर मैले तिनीहरूलाई यस्तो जवाफ दिएँ: “स्वर्गका परमेश्‍वरले नै हामीलाई सफल तुल्याउनुहुनेछ+ र हामी उहाँका सेवकहरूले यो पर्खाल बनाउनेछौँ। तर यरुसलेममा तिमीहरूको न कुनै भाग छ, न कुनै अधिकार! न त तिमीहरूले यरुसलेममा सम्झन लायकको कुनै काम नै गरेका छौ।”+
^ यसले यूफ्रेटिस नदीको पश्‍चिममा पर्ने इलाकालाई जनाउँछ।